३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण : तीन न्यायाधीशले बुझाए प्रस्टीकरण, अब के होला ? — Motivatenews.Com
३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण : तीन न्यायाधीशले बुझाए प्रस्टीकरण, अब के होला ?
काठमाडौं – ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनमा तानिएका उच्च अदालत विराटनगरका तीन न्यायाधीशले न्यायपरिषदमा प्रस्टीकरण बुझाएका छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश थीरबहादुर कार्की, साधुराम सापकोटा र उमेश सिंहले न्यायपरिषदमा आफैं उपस्थित भएर प्रस्टीकरण पेस गरेका छन् ।
न्यायपरिषदमा बुझाएको प्रस्टीकरण विषयमा न्यायाधीश साधुराम सापकोटाले आफूले केही नबोल्ने बताए । ‘न्यायपरिषद्ले जे सुकै गरोस्, म अहिले बोल्दिनँ,’ उनले भने ।
न्यायपरिषद्को छानबिनमा परेकामध्ये मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेल र न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र जनक पाण्डेमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन नसकेकाले उनीहरूले सफाइ पाएका थिए । सोही प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीश उमेशराज पौडेल र नागेन्द्रलाभ कर्णले न्याय सेवाबाट अवकाश पाइसकेका छन् । उनीहरूविरुद्ध लागेको आरोपका फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको छ ।
आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।